Tag: nkwukọrịta ahịa
Ịgụ Oge: 10 nkeji Echiche Simo Ahava gbara gharịị maka ogo data na usoro nkwukọrịta mere ka ọnụnọ ụlọ niile dị na Go Analytics mezie ka ebe ezumike niile dị! ogbako. OWOX, onye ndu MarTech na mpaghara CIS, nabatara ọtụtụ puku ndị ọkachamara na nzukọ a iji kesaa ihe ọmụma na echiche ha. OWOX BI Team ga-achọ ka ị chee echiche nke Simo Ahava tụpụtara, nke nwere ikike ime ka azụmahịa gị too. Ogo nke data na ogo nke nzukọ The
Ịgụ Oge: 4 nkeji Otu izu ma ọ bụ karịa gara aga, a gwara m ka m kwuo okwu na mmemme mpaghara na Intanet nke Ihe. Dịka onye na-akwado pọdkastị Dell Luminaries, enwere m ụda nke ikpughe na Edge Mgbakọ na teknụzụ ọhụụ nke amalitelarị ịmalite. Agbanyeghị, ọ bụrụ n'ịchọrọ ị nweta ohere ịzụ ahịa n'ihe metụtara IoT, a naghị ekwu ụka nke ọma n'ịntanetị. N'ezie, ọ na-ewute m ebe ọ bụ na IoT ga-agbanwe mmekọrịta dị n'etiti